Wararka - Sida loo doorto sariirta isbitaalka daryeelka guriga ku habboon ee bukaanka
Sida loo doorto sariirta isbitaalka daryeelka guriga ee bukaanka habboon
1. Badbaadada iyo xasiloonida sariiraha kalkaalinta. Sariirta guud ee kalkaalinta caafimaad waxaa loogu talo galay bukaan socodka dhaqdhaqaaqiisa xadidan yahay oo sariir jiifa mudo dheer. Tani waxay horay u dhigeysaa shuruudo sare oo loogu talagalay badbaadada iyo xasilloonida sariirta. Isticmaaluhu waa inuu soo bandhigaa shahaadada diiwaangelinta iyo liisanka wax soo saarka ee sheyga Maamulka Dawooyinka markuu wax iibsanayo. Sidan oo kale, badbaadada daryeelka caafimaadka ee sariirta kalkaalinta caafimaad waa la damaanad qaaday.
2. Waxqabadka sariirta. Sariiraha kalkaalinta caafimaad waxaa loo qaybin karaa koronto iyo gacan qabsi. Buuggu wuxuu ku habboon yahay baahiyaha kalkaalinta caafimaad ee muddada gaaban ee bukaannada waxayna ku xallin kartaa dhibaatada kalkaalinta caafimaad ee adag muddo gaaban. Korontadu waxay ku habboon tahay qoysaska leh bukaannada jiifka muddada dheer ee naafada ka ah dhaqdhaqaaqa. Tani ma aha oo kaliya inay si weyn u yareynayso culeyska saaran shaqaalaha kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo xubnaha qoyska, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah in bukaanku kaligiis xakameyn karo noloshooda, taasoo si weyn u wanaajinaysa kalsoonida ay ku qabaan nolosha, maahan oo keliya nolosha. Baahida qofka ayaa sidoo kale gaadhay qanacsanaan naftiisa ah marka loo eego tayada nolosha, taas oo ku habboon soo kabashada cudurka bukaanka.
Ta saddexaad, dhaqaalaha sariiraha kalkaalinta caafimaad, sariiraha kalkaalinta quwadda korontadu way ka xoog badan yihiin sariiraha kalkaalinta bukaanka ee gacanta lagu qaato, laakiin qiimaha ayaa dhawr jeer ka sarreeya sariiraha xannaanada ee gacanta lagu qaato, qaarkoodna shaqooyin dhammaystiran ay gaadhaan tobanaan US $ 15,000. Qodobkan sidoo kale waa in la tixgeliyaa marka wax la iibsanaayo.
4. Gogosha sariirta ee kalkaalinta oo leh laba laab, laba laab laab saddex laab, afar laab, iwm. Tani waxay ku habboon tahay daryeelka caafimaadka qaar ka mid ah bukaannada ka soo kabanaya jabka iyo bukaannada muddada dheer jiifa. Waxay ku habboon tahay hurdada bukaanka gaarka ah, daraasadda, madadaalada iyo baahiyaha kale.
5. Sariiraha lagu xanaaneeyo oo leh musqulo iyo alaarmiga qoyaanka ee shaambooga iyo aaladaha dharka lagu maydho. Qalabkani waa mid waxtar u leh bukaanka daryeelkiisa caadiga ah ee is-nadiifinta iyo bukaannada kaadi-ceshan la'aanta kaadida ah, waxayna u fududeeyaan bukaanka kaadida iyo daryeelka saxarada.
Tarooli Laptop, Isbitaalka gawaarida, Trolley Medical, Tarooli Medical Iyadoo khaanado, Gawaarida Gawaarida Caafimaadka, Tarooli Kalkaalinta wireless,